TRATRA TANY IHOROMBE ILAY TOVOLAHY 31 TAONA NILAZA HO MPIASAN’NY BIANCO
Ny talata 06 septambra 2011 tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina dia nisy lehilahy iray nitonona ho Kolonely Hery, tonga tao amin’ny komandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena Ihorombe. Rehefa nalefa tao amin’ny vondron-tobim-paritra anefa izy io dia nitonona ho kapiteny Hery indray.
Nilaza ity lehilahy ity fa iraka manokana avy tamin’ny Birao mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly (BIANCO) Antananarivo, ka miaraka amin’ny zandary efatra avy ao amin’ny GSIS sy polisy dimy avy ao amin’ny FIP, ary handeha hisambotra ny tonia mpampanoa lalana (Procureur de la République), ao amin’ny Tribonaly ambaratonga voalohany ao Ihosy. Rehefa nanontaniana ny antontan-taratasy ho entiny manatanteraka izany asa izany anefa ny tenany dia tsy afaka nanome izany.
Nampiahiahy ny kolonely Reribake Jeannot, komandin’ny vondron-tobim-pileovana (Groupement) sy ny komandà Ranaivoarison Théodule, komandin’ny vondron-tobim-paritra (Compagnie), araka izany, ny fihetsik’ity lehilahy ity ka nahatonga azy ireo hamotopototra taty amin’ny foiben’ny Bianco Antananarivo. Namaly anefa ny Bianco Antananarivo fa tsy misy io olona io miasa ao amin’izy ireo. Nandray andraikitra avy hatrany ireo tompon’andraikitra voalaza etsy ambony ka nisambotra tsy nisy hatak’andro ilay tovolahy.
Rehefa natao ny fanamarinana dia fantatra fa izany Heriniaina Jerry Shanmane izany no anarany ary 31 taona izy, mpanofana amin'ny trano fandraisam-bahiny no asany, mipetraka any Taolagnaro Fantatra ihany koa fa efa tena jiolahy raindahiny mpisoloky mihitsy izy io. Efa eo am-pelan-tanan’ny Groupe d’Appui à la Police Judiciaire (GAPJ) ao amin’ny Groupement Ihorombe ny fanadihadiana ity raharaha ity amin’izao fotoana izao.